လမျးလြှောကျသူတှအေတှကျ လမျးမီးရှိမရှိပွသပေးမယျ့ Google Maps | Myanmar Mobile App
Home Trending App/Game လမျးလြှောကျသူတှအေတှကျ လမျးမီးရှိမရှိပွသပေးမယျ့ Google Maps
လမျးလြှောကျသူတှအေတှကျ လမျးမီးရှိမရှိပွသပေးမယျ့ Google Maps
A mobile phone with the Google Maps application is seen in this photo illustration on September 18, 2018. Google is set to partner with the worlds largest car manufacturing group Renault-Nissan-Mistubishi to provide its Android operating system for media screens in their vehicles. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)
Google Maps က ကားမောငျးခွငျးနဲ့ ယာဉျကွောအခွအေနတှေအေတှကျ အတျောလေးအသုံးတညျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး မနှဈကတုနျးက ခွလေငျြအတှကျလညျး feature လေးတှထေညျ့ပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ မကွာသေးခငျတုနျးက AR walking direction တှေ၊ အမွငျအာရုံခြို့တဲ့သူတှအေတှကျ စကားနဲ့လမျးကွောငျးကို ပွောဆိုပေးတာတှေ ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။ နောငျအနာဂတျမှာတော့ Google ဟာ ညအခြိနျလမျးလြှောကျတဲ့အခါ လုံခွုံတဲ့လမျးကိုရှေးခယျြစနေိုငျဖို့အတှကျ ကူညီပေးသှားမှာပါ။
XDA Developers ရဲ့အဆိုအရ Google Maps ထဲမှာ Lighting layer အသဈလေးကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ layer လေးဟာ ဘယျလမျးတှကေတော့ဖွငျ့ လမျးမီးတှရှေိတယျ၊ လငျးတယျဆိုတာကို အဝါရောငျ highlight လေးနဲ့ပွထားပါတယျ။
ဒါဟာ ညအခြိနျမှောငျမဲနတေဲ့လမျးတှကေို ရှောငျခငျြတဲ့လမျးလြှောကျသူတှအေတှကျ အဆငျပွစေမှောပါ။ ဒါဟာ လူအမြားနဲ့သကျဆိုငျနတေဲ့ကိစ်စတဈခုဖွဈကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့လတှကေ တှဈတာပို့ဈတှကေိုကွညျ့လိုကျရငျ သိသာနပေါတယျ။
Lighting feature လေးဟာ လကျရှိမှာ အတညျမပွုရသေးသလို သုံးနတေဲ့ screenshot တှလေညျး တကျမလာသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး code ရှာတှပွေီ့ဆိုတော့ မကွာခငျမှာမွငျတှရေ့ဖို့ရှိနပေါတယျ။ XDA Developer တှကေတော့ အိန်ဒိယကိုအရငျဆုံးထုတျပေးနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ မကွာသေးခငျက တိုကျခိုကျမှုတှေ၊ အမြိုးသမီးတှကေို မုဒိနျးကငျြ့ခံရမှုတှကေ သတငျးစာခေါငျးစီးမှာ နရောယူထားလို့ပါ။
Google အနနေဲ့ လမျးမီးအခွအေနကေို ဘယျလိုမြား သတငျးအခကျြအလကျယူသလဲဆိုတာ မေးခှနျးထုတျသငျ့ပါတယျ။ စမတျလမျးမီးတှဆေိုတာ ရှားပါးနတေုနျးပါပဲ။ သုံးစှဲသူတှကေပေးပို့တဲ့အခကျြအလကျတှကေို အခွခေံပွီးတော့ လုပျဆောငျမလား။ ဒါပဲဖွဈနိုငျပါတယျ။
Google Maps က ကားမောင်းခြင်းနဲ့ ယာဉ်ကြောအခြေအနေတွေအတွက် အတော်လေးအသုံးတည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မနှစ်ကတုန်းက ခြေလျင်အတွက်လည်း feature လေးတွေထည့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ မကြာသေးခင်တုန်းက AR walking direction တွေ၊ အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူတွေအတွက် စကားနဲ့လမ်းကြောင်းကို ပြောဆိုပေးတာတွေ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ နောင်အနာဂတ်မှာတော့ Google ဟာ ညအချိန်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ လုံခြုံတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်စေနိုင်ဖို့အတွက် ကူညီပေးသွားမှာပါ။
XDA Developers ရဲ့အဆိုအရ Google Maps ထဲမှာ Lighting layer အသစ်လေးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ layer လေးဟာ ဘယ်လမ်းတွေကတော့ဖြင့် လမ်းမီးတွေရှိတယ်၊ လင်းတယ်ဆိုတာကို အ၀ါရောင် highlight လေးနဲ့ပြထားပါတယ်။
ဒါဟာ ညအချိန်မှောင်မဲနေတဲ့လမ်းတွေကို ရှောင်ချင်တဲ့လမ်းလျှောက်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ဒါဟာ လူအများနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက တွစ်တာပို့စ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် သိသာနေပါတယ်။
Lighting feature လေးဟာ လက်ရှိမှာ အတည်မပြုရသေးသလို သုံးနေတဲ့ screenshot တွေလည်း တက်မလာသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း code ရှာတွေ့ပြီဆိုတော့ မကြာခင်မှာမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ XDA Developer တွေကတော့ အိန္ဒိယကိုအရင်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မကြာသေးခင်က တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်ခံရမှုတွေက သတင်းစာခေါင်းစီးမှာ နေရာယူထားလို့ပါ။
Google အနေနဲ့ လမ်းမီးအခြေအနေကို ဘယ်လိုများ သတင်းအချက်အလက်ယူသလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါတယ်။ စမတ်လမ်းမီးတွေဆိုတာ ရှားပါးနေတုန်းပါပဲ။ သုံးစွဲသူတွေကပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မလား။ ဒါပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleApple TV 4K ပျေါမှာ Apple TV+ show တှကေို Dolby Vision နဲ့ ကွညျ့မရတော့
Next articleOnePlus 8 Lite လို့ယူဆရတဲ့ mid-range OnePlus ဖုနျးအသဈထှကျပျေါလာ